उपत्यकामा ३ सय २६ सहित थप ९ सय ७९ नयाँ संक्रमित – Nepalilink
उपत्यकामा ३ सय २६ सहित थप ९ सय ७९ नयाँ संक्रमित
३० हजार ६ सय ७७ जना डिस्चार्ज
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर एक हजार ७३६ जना कोरोना सङ्क्रमणबाट मुक्त भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले हालसम्म सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या ३० हजार ६७७ पुगेको जानकारी दिए । नेपालमा जम्मा सङ्क्रमणमध्ये निको हुने ६५ प्रतिशत छन् ।
काठमाडौँ उपत्यकामा ३२६ सहित देशभर ९७९ नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन् । थपिएका सङ्क्रमितमध्ये ६४१ पुरुष र ३३८ महिला छन् । देशभरमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या ४७ हजार २३६ पुगेको छ । उपत्यकामा थपिएका सङ्क्रमितमध्ये काठमाडौँमा २९३, ललितपुरमा २० र भक्तपुरका १३ छन् ।
पछिल्लो २४ घण्टामा देशभरका प्रयोगशालामा गरी नौ हजार २१८ नमूना परीक्षण भयो । हालसम्म सात लाख ७७ हजार ५६३ नमूना परीक्षण भइसकेको छ । देशभर क्वारेइन्टिनमा रहने चार हजार ७३९ छन् । देशभर १६ हजार २५९ सक्रिय सङ्क्रमितमध्ये नौ हजार ६६ संस्थागत र सात हजार १९० होम आइसोलेसनमा छन् ।
प्रदेशअनुसार, संस्थागत आइसोलेसनमा सक्रिय सङ्क्रमित प्रदेश १ मा एक हजार ७३१, प्रदेश २ मा ४८२, बाग्मतीमा चार हजार ८४०, गण्डकीमा ८३६, प्रदेश ५ मा एक हजार ९७, कर्णालीमा ३३६ र सुदूरपश्चिममा ७४७ छन् । होम आइसोलेनमा प्रदेश १ मा ७९०, प्रदेश २ मा तीन हजार, बाग्मतीमा दुई हजार ३३४, गण्डकीमा एक सय, प्रदेश ५ मा ८०७, कणार्लीमा ४० र सुदूरपश्चिममा ११९ छन् ।
देशभर १७१ सङ्क्रमित आइसियुमा छन् । प्रदेश १ मा छ, प्रदेश २ मा २४, बाग्मतीमा १११, गण्डकीमा पाँच र प्रदेश ५ मा २१, कणार्लीमा तीन र सुदूरपश्चिममा एक जना आइसियूमा छन् । बाग्मतीमा १८ र प्रदेश ५ मा दुई सङ्क्रमित भेण्टिलेटरमा छन् ।
पछिल्लो २४ घण्टामा देशरभका ४५ जिल्लामा नयाँ सङ्क्रमित भेटिएका छन् जसमा उदयपुर एक, झापा १६, पाँचथर छ, भोजपुर एक, मोरङ ३९, सुनसरी ६५ र सोलुखुम्बु एक रहेका छन् । धनुषा ४४, महोत्तरी तीन, सप्तरी १९, सर्लाही २० र सिराहा ४१, काठमाडौँमा २९३, ललितपुर २०, भक्तपुर १३, काभ्रेपलाञ्चोक २८, चितवन १९, दोलखा तीन, धादिङ चार, मकवानपुर ७३, सिन्धुपाल्चोक तीन र सिन्धुली एक सङ्क्रमित पुष्टि भएको छ ।
देशका ११ जिल्लामा सङ्क्रमित पाँच सय बढी छन् भने पाँच जिल्लामा शून्य रहेको छ । पाँच सय बढी रहेका जिल्लामा मोरङ, सुनसरी, पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, धनुषा, चितवन, ललितपुर, काठमाडौँ र रुपन्देही छन् ।
सङक्रमित शून्य जिल्लामा मुस्ताङ, ताप्लेजुङ, डोल्पा, मुगु र हुम्ला छन् । काठमाडौँ, वीरगञ्ज, धनगढी, बुटवललगायतका शहरमा सङ्क्रमण बढिरहेको प्रवक्ता डा. गौतमले बताए ।
दोस्रो चरणमा गरेको बन्दाबन्दी सकिनै लागेपनि सङ्क्रमण बढिरहेको गौतमको भनाइ छ । उनले भने, “प्रकोपको अवस्था र स्थानको आँकलन गरेर थप प्रभावकारी काम गर्नै विषयमा सम्बन्धित निकायबाट समन्वय र सहजीकरण हुँदै जानेछ ।”